Usihlalo wegadi ubeka iBrisbane yangaphandle ifenitshala enetafile yekofu, ifenitshala yangaphandle yeTshayinaSupplier.com
Indawo yokubonelela Furniture Ifenitshala yangaphandle Isitulo seGadi simisa iBrisbane yangaphandle yeZiko loLingo ngeTafile yeKofu
Isitulo seGadi simisa iBrisbane yangaphandle yeZiko loLingo ngeTafile yeKofu
Iifayile ze-1 I-US $ 402.57 / Sets
I-Olefin kunye neMarble, isakhelo se-Iron; Intambo ye-Olefin; Uthango olwenziwe ngabantu ngentsimbi eqinileyo
I-Guangdong, China, Guangdong, China (Mainland)
Igama lemveliso: UMiami uSihlalo oMnye kunye neTafile yeKofi kaSanya
Isinyithi figama (1.2mm + 1.5mm); Intambo ye-Olefin 6mm; Mable eyenziwe ngumntu ngentsimbi eqinileyo eyi-14mm
SIZE L * W * H (CM) 60*58*71cm & 70*70*72cm
Ukusinda okushiyekile: (Usihlalo) 8.2kg + (Itheyibhile) 27kg
Umqamelo: 54 * 54 * 5cm
Isiqinisekiso: I-SGS yamkelwe
I-TANFLY, inkampani yethu, ebekwe eFoshan, kwiPhondo lase-Guangdong, ingumsebenzi wobuchwepheshaumenzi nal kunye kumazwe angaphandle ethembekileyo zeepatiyo ifanitshala yangaphandle China.
Inkampani yethu ijolise ikakhulu kwivenkile yeRattan, irattan swing chair hammock, isofa seemodyuli, iseti yokutya, isitulo seRattan, itafile ye-rattan, ibha kunye nesitulo, indawo yokuphumla, isambrela sangaphandle, ifenitshala yealuminiyam kunye neefenitshala zekampu njl. iinkonzo kunye nomgangatho wempahla yangaphandle kubathengi bethu nakwizihlobo ezisuka ekhaya nangaphakathi.
Inkampani yethu ine-profioIqela elidibeneyo elinombono wehlabathi kunye nokuqonda kwendawo.
Abasebenzi bethu abavela kwisebe lethu le-R & D banamava atyebileyo ekuphononongeni i-fashioIzinto ezinokubakho kunye nokugcina i-traditioimikhwa kunye neemveliso zethu. Iqela lethu lokuthengisa, ngokukhonza ngenzondelelo, lifumene uqeqesho olucwangcisiweyo kwi-internatiourhwebo lwamva kunye nentengiso yasekhaya. Iqela lethu leQC linoluvo olomeleleyo loxanduva, coUbuchule kunye nomoya weqela.
Siza kugcina umxholo "wokunyaniseka, ubuchule, ukusebenza nzima nokusebenza nzima" ukubonelela abathengi bethu ekhaya nakumazwe aphesheya ngeenkonzo ezahlukeneyo ezintle ngentliziyo iphela. Siza kuya kude sihlangabezane neemfuno zakho! Siza kunciphisa iindleko zakho! Siya kuphucula ukusebenza kwakho!
Ukwaneliseka kwabaxhamli yeyona nto sijolise kuyo. Siyathemba ukuba abathengi bethu okanye abasebenzisi beetheminali banokuyonwabela imvakalelo yokuhlala kunye nolwaneliseko ngokukhetha iindawo zethu zeTANFLY, ukufezekisa izibonelelo zethu eziphezulu.
Isikali: Amava eminyaka eli-7, ngaphezulu kwe-100 labasebenzi kunye ne-7,000 yeemitha zesikwere Umzi-mveliso, 2,000 square metres Igumbi lokubonisa kunye neofisi.
Umgangatho: I-SGS ivunyiwe.
Ubungakanani: ngaphezulu kwe-300 * 40HQ coI-ntainers yokuxhotyiswa kwefanitshala ngonyaka.
Ukuhanjiswa: Inkqubo yoku-odola eyi-OA iqinisekisa ukuhanjiswa kweentsuku ezili-15-25.
· Emva kokuthengisa: Zonke izikhalazo zisingatha ngaphakathi kweentsuku ezi-1-3.
I-R & D: Iqela le-R & D lomntu eli-4 lijolise kwiimpahla zangaphandle, ubuncinci ikhathalogu enye entsha ekhutshiweyo ngonyaka.
Isisombululo sesitenitshala sangaphandle: I-TANFLY ibonelela ngesisombululo sefenitshala yangaphandle.
Contact kuthi! Uya kuqala amava amatsha e-China! Ngemizamo edibeneyo, sinokonwabela iziqhamo ze-eco enamandlaukukhula okukhoyo kwihlabathi.
I-Tanfly igxile kuyilo lwefanitshala yangaphandle, ukwenziwa kunye nentengiso.
Ngaphezulu kweminyaka esixhenxe yamava ekwenziweni kweemveliso zefanitshala zangaphandle zepremiyamu, ngoku siqalise ukwanda kwemodeli yethu yeshishini yokuhlanganisa online yokuthengisa kwisicwangciso sethu sonke.
Umnqweno wethu kukunciphisa iindleko kubaxumi bethu ngokususa abathathi-nxaxheba ngokungeyomfuneko ekuhanjisweni kweemveliso zethu. Ukunxibelelana ngokuthe ngqo nabaxumi, siyakholelwa, sisitshixo ekuhambiseni iimveliso ezisemgangathweni ngendlela efanelekileyo, yobuchwepheshaNal indlela.
Sijolise kwinkampani egxile ngokupheleleyo kubathengi. Isibophelelo sethu esiphambili kukubonelela abathengi bethu ngeemveliso ezikowona mgangatho uphakamileyo, ezikhuselekileyo nekulula ukuzihlanganisa, ukuzisebenzisa nokuzonwabisa.
Isiqwenga ngasinye sefanitshala siyazuza kubusy, siqwalasele kakuhle, i-ergonomic, uyilo lwangoku. Zonke iimveliso zivavanywe ngokuqatha kumgangatho kwaye imiyalelo yebandla lethu ibisemgangathweni, ukuba ibe lula kwaye isebenze lula. Izitayile zethu zakudala kunye nobugcisa obunokuthenjwa buya kuba yimozulu etshintsha rhoqo kunye nokusetyenziswa rhoqo, kwiminyaka ezayo.
Njengomthengi wethu, unokuqiniseka ukuba ulindelo lwakho, iminqweno namaphupha atyhala ukuba sisebenzisaneukuphucula umgangatho weemveliso kunye neenkonzo zethu.
Indawo yokusebenzela iTanfly:
Amanqanaba eTanfly kwinombolo 1 kuGoogle:
Ukuthengiswa kweTanfly kwihlabathi liphela:
Abathengi beTanfly batyelele
Abasebenzi baseTanfly banobuchule emsebenzini wabo, i-spongokusebenza ixesha elongezelelekileyo, (ixesha lokusebenza: 8: 30-23: 30), ilifa le-natioUmoya weminyaka engama-5,000 XNUMX wophuhliso ilizwe laseTshayina ebelisebenza nzima ukufezekisa.
Imifanekiso engezantsi ibonisa indlela umphathi weentengiso u-kevin eTanfly abala ngayo i-CBM yefenitshala yentambo.
Thina tanflyfly sinenkcubeko yethu ekhethekileyo yenkampani:
Kunikezelwa kuphuhliso lwexesha elide lweFenitshala yangaphandle enomoya wobugcisa (wokuzabalazela okona kulungileyo).
Abasebenzi banobomi obutyebileyo kunye nemibala eTanfly. Umphathi omkhulu we-Tanfly ulumkile kwaye unobuntu.
Iinkokeli kwinkathalo yeTanfly aUbomi babasebenzi kwaye bahlala beququzelela ukuhamba. Ezingqondweni zabasebenzi, endaweni yokuthi iTanfly yinkampani, kungcono ukuthi iTanfly lusapho olufudumeleyo.
Ifenitshala emdaka ngexabiso eliphantsi
ifanitshala yeentambo e-india
Ifenitshala eyenziwe ngentambo
ifanitshala yangaphandle yentambo
ifanitshala yangaphandle engenanto